किन चर्चित बन्यो क्लब हाउस एप ? कसरी खोल्ने एकाउन्ट ? - Sagarmatha TV
काठमाडौं – पछिल्लो ३/४ सातायता नेपाली सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु माझ चर्चाको बिषय बनिरहेको छ, क्लब हाउस । विश्वभर सामाजिक सञ्जालका एपहरुसंगै थपिएको क्लब हाउस नेपालमा पनि चर्चित बन्दै गएको छ ।
अहिले इन्टरनेटका धेरै प्रयोगकर्ताहरु क्लब हाउसमा जोडिएका छन् । यस एपमा आवाजको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताहरु बीच विभिन्न विषयमा सामुहिक र छुट्टाछुट्टै अनलाइन छलफल गर्न सकिने भएपछि यसको लोकप्रियता नेपालीमाझ बढेको हो ।
यसमा प्रयोगकर्ताले आफूलाई मन लागेको बिषयमा भइरहेको कुराकानी सुन्न वा आफैले समुह बनाई अन्तक्रियामा गर्न सक्छन् । जो मनोरञ्जन र ज्ञान दुबै हिसाबमा उपयोगी छ ।
सन् २०२० को मार्चमा अल्फा एक्सप्लोरोसन कम्पनीका पल डेभिसन र रोहन सेथले आईओएस भर्सनमा ल्याएको एप एन्ड्रोइड भर्सनमा ल्याएपछि चर्चित बन्यो ।
क्लब हाउस एप चलाउन यसमा सदस्य भइसकेका प्रयोगकर्ताले ‘इन्भाइट’ गर्नुपर्छ अर्थात् यो सामाजिक सञ्जालमा बोलाउनुपर्छ । अन्यथा यसमा सोझै प्रवेश गर्न पाइँदैन । कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएपछि बजारमा आएको क्लब हाउसले छाटो समयमा नै चर्चा पायो ।
यसमा केवल अडियो मात्र प्रयोग हुन्छ । यस अलावा परिचय, शिर्षक र कमेन्ट लेख्न अक्षर र प्रोफाइलमा राख्न तस्बिर प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो एक प्रकारको भर्चुअल रुम भएकाले यसमा ओपन रुम, सोसियल रुम र क्लोज्ड रुमका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यसरी खोल्नुहोस् क्लब हाउसमा एकाउन्ट
सुरुमा आफ्नो मोवाइलमा यो एप डाउनलोड गर्ने र यसअघि नै सो एपका प्रयोगकर्ताको इन्भाइट पछि मोबाइल नम्बरमा आएको कोड वा लिंक राखेर यो एप चलाउन सकिन्छ । यसकालागि एकजना प्रयोगकर्ताले ५ जनालाई भन्दा बढिलाई निःशुल्क इन्भाइट गर्न मिल्दैन । अन्यथा लिमिट कटेपछि तोकेको शुल्क बुझाउनुपर्छ ।
क्लब हाउसको एउटा रूममा एक पटकमा ५ हजार प्रयोगकर्ता समेट्न मिल्छ । क्लब हाउस लोकप्रिय भएपनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले भने कमजोर देखिएको छ । यसमा जो सुकैले जे सुकै विवरण भरेर एकाउन्ट बनाउने र जे पनि बोल्न पाउने भएकाले यसको सुरक्षामा भने प्रश्न उठेको छ ।